Akpa Tote Canvas, Akpa ịzụ ahịa anaghị kpara akpa - Tongxing
Nabata na akpa TongXing
Dị ka onye na-emepụta akpa ụwa zuru ụwa ọnụ, anyị na-enye ngwaahịa dị mma na gburugburu ebe obibi.
Anyị bụ ozugbo Factory, otu nkwụsị ngwọta si imewe na okokụre, àgwà ngwaahịa na asọmpi price. Anyị nwere ike imeziwanye echiche gị ka ọ bụrụ eziokwu.
Nhazi & okike
Ị chepụta ya, anyị kere ya. Anyị na-eche mgbe niile site na igbe na-egbusi anya nke ọhụrụ na ọnọdụ. Ihe ọ bụla omenala ma ọ bụ echiche megidere, anyị na-elekwasị anya na ụdị dị iche iche na-akpali akpali iji mee ka obere nrọ gị pụta ìhè ọbụna karịa ihe ị chere.
Anyị nwere ndị otu na-ahụ maka njikwa dị mma nke nwere ihe karịrị 15 + ndị nyocha nwere ahụmahụ na-elele ngwa ahịa otu otu tupu mbupu. Site na nkwado siri ike yana mmekọrịta dị ogologo na ụlọ ọrụ ika, anyị nwere nkwenye BSCI, Disney.
Nnyefe & Ọrụ ndị ahịa
Oge nlele chọrọ ụbọchị 5-7 ma ewezuga ọrụ aka pụrụ iche ejiri rụọ ọrụ ma ọ bụ teknụzụ obibi. Mmepụta uka dabere na ọnụọgụgụ. Anyị na-anabata ngwaahịa ahaziri ahazi na enweghị MOQ. A ga-aza ajụjụ gị n'ime awa 24.
Anyị bụ Disney/BSCI Audit Factory, na-elekwasị anya na ngwaahịa gburugburu ebe obibi, ma nwee ike ịme ụdị akpa ọ bụla.
Ejiji Ladies Plain Cotton Akpa Custom Canv...
Akpa ụlọ akwụkwọ Cartoon Animal Kids Wholesale Facto...
Omenala Japan Stylen akwa akwa akwa na-enweghị aka.
Eco enyi na enyi uzuzu mkpuchi akpụkpọ ụkwụ akpa omenala ...
Akpa ozi akpa ụmụ nwanyị na-ewu ewu na-ewu ewu
Omenala Bipụta Denim Canvas Tote Bag Eco Friendly...
Akpa akpa ejiji Corduroy Sling Style nke Japan...
Omenala emeputa N'ogbe yi mara kwa ụbọchị Si...
Akpa ịsacha njem nlegharị anya n'oge okpomọkụ nwere folda Logo...
Ejiji Fluorescence obere akpa mmiri anaghị ekpuchi mmiri PVC ...
Akpa zipa ntị mara mma mara mma nwere Logo Ma...
Ọnụ ego nke Guangzhou Tongxing Packaging Product Co., Ltd. bụ onye na-emepụta ọkachamara maka ọtụtụ ụdị akpa nke dabeere na otu ndị na-emepụta ihe dị elu, ndị ahịa ahịa dị mma na ụbara ndị ọrụ nwere nkà. N'ịgbaso usoro ejiji na mmepe ahịa, ngwaahịa anyị na-etinye aka na akpa ịzụ ahịa (akpa na-abụghị akpa, pp akpa akpa, akpa akpa), akpa ịchọ mma, akpa drawstring, akpa oyi, akpa azụ, wdg. Tongxing nwere ahụmahụ bara ụba na OEM / ODM, ụlọ ọrụ mmepụta ihe gafere. Nyocha ụlọ ọrụ Disney, BSCI, ISO, SGS asambodo. N'ihe dị mkpa nke nkwakọ ngwaahịa Tongxing bụ "njikwa iguzosi ike n'ezi ihe, ọrụ mmepụta ihe na ntinye aka dị mma. Ya mere, anyị enwetawo ntụkwasị obi nke ndị ahịa n'ụwa nile. Ndị ọrụ anyị gụnyere Disney, Coca-cola, Desigual, Julies, PEPSI, wdg.